धेरै पढेका १० हिरोहरु जस्ले चलचित्र क्षेत्रमा निकै नाम कमाएका छन् | KR News
April 20, 2018 KR NEWS
२०७५ बैशाख ६ बिहीबार
एउटा यस्तो समय थियो, जतिवेला नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पढेको अभिनेता को हो भन्यो भने, सवैले लिने नाम थिए,– राजेश हमाल । किनभने त्यसवेला एमए गरेको, त्यसमाथि अंग्रेजी साहित्यमा पढेको हिरो अर्को कोही पनि थिएन ।
राजेशसँग स्पर्धामा रहेका अर्का अभिनेता धिरेन शाक्यले उल्लेख्य मात्रामा पढेका थिएनन् भने हमालका अर्का प्रतिस्पर्धी सरोज खनालले स्नातकसम्म अध्ययन गरेका थिए । हमालभन्दा केही अघिका भुवन केसीले पनि वीकम गरेका थिए । भुवन र सरोज पनि उतिवेला पढेकै अभिनेतामा दरिन्थे । हमालभन्दा निकै अघिका अभिनेता विश्व बस्नेतले मनग्गे पढेका थिए । कर्णेल भक्तबहादुर बस्नेतका छोरा विश्व सिन्दुर फिल्ममार्फत सफल हिरो भएपछि नेपाली सिनेमा पहुँच भएका दर्शक माझ आइलडनै बनेका थिए ।
यी त इतिहासका कुरा हुन् । वर्तमानमा आउने हो भने पनि धेरै अभिनेता अन्डर एसएलसी, अन्डर प्लस टु र अन्डर ग्राजुएट छन् । अर्थात अहिले पनि मास्टर्श गर्ने अभिनेताहरुको खडेरी छ ।
चलेका अभिनेता सौगात मल्ल अन्डर एसएलसी हुन् । आयुसमान देशराज जोशी र पल शाह अन्डर प्लस टु हुन् भने चर्चित अभिनेता अनमोल केसी अन्डर ग्राजुएट हुन् । विराज भट्ट, दिलिप रायमाझी, दयाहाड राई, आर्यन सिक्तेल, नाजिर हुसेन लगायतका कलाकारले कति पढेका छन् भन्ने जवाफ उल्लेख्य छैन । तर अभिनयमा उनीहरुको स्वअध्ययनको कुरा गर्ने हो भने त्यो मास्टर्शभन्दा कम नलाग्ला । अझ केदार घिमिरे, सिताराम कट्टेल, नारद खतिवडा, दिपकराज गिरी, हरिबंश आचार्यले त स्वअध्ययनमा पिएचडी नै पुरा गरेका होलान् ।
तर, आज हामी औपचारिक अध्ययनमा अगाडि रहेका अभिनेताहरुको चर्चा गर्न खोजिरहेका छौं । अर्थात चलचित्र क्षेत्रमा धेरै पढेका अभिनेताहरुको फेहरिस्त पेश गर्न खोजेका हौं । अर्को भाषामा भन्नुपर्दा विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र लिएका हिरोहरु आजको हाम्रो रिपोर्टका पात्र हुन् । सवैभन्दा पहिला धेरै पढेकाहरुको सूचीको १० औं नम्मरमा परेका अभिनेताको कुरा गरौं –
१०. भुवन केसी
जागे सारा रात बोलको गीत गाएर गायकको रुपमा मनोरञ्जन दुनियामा पाइला राखेका थिए, अभिनेता भुवन केसीले । उनी राम्रो अभिनयको साथ साथै राम्रो गायक पनि हुन् । रेडियो नेपालबाट कारियर सुरु गरेका उनले चलचित्र जुनी बाट नेपाली सिने क्षेत्रमा प्रवेश पाएका थिए । उनले बी.कम अर्थात ब्याचलर इन कमर्शसम्मको अध्ययन गरेका छन् । उतीवेला यतिसम्मको अध्ययनलाई राम्रो मानिन्थ्यो ।
९. जीवन लुइटेल
सन् २००२ मा मिष्टर नेपाल भएपछि चलचित्रमा आकर्षित भएका जीवन लुइटेलले छोटो समयमा धेरै फिल्ममा अभिनय गरे । उनको पहिलो फिल्म थियो, तिर्खा । खासगरी विकास आचार्यका फिल्म र अभिनेता आर्यन सिक्तेलको प्रतिस्पर्धी भएपछि उनले धेरै फिल्म पाएका थिए । उनले अभिनय गरेको पछिल्लो फिल्म राधाले राम्रै सफलता पाएको निर्माण पक्षको दावी रहेको छ । उनले बिजिनेश स्टडिजमा ब्याचलर गरेका छन् । जीवन लुइटेल केही समयदेखि अमेरीकामा बसोबास गर्दै आएका छन् ।
८. सलोन बस्नेत
– बालकलाकार भएर नेपाली बाबु बाट नेपाली सिने क्षेत्रमा उदाएका अभिनेता हुन् सलोन बस्नेत । चलचित्र होस्टेलमा उनको अभिनयको सबैले तारिफ गरे । जिवनत अभिनयका धनी सलोनले बिजिनेश स्टडिजमा ब्याचलर गरेका छन् । बाबु सोभित र काका जयकिशनको प्रेरणाले यस क्षेत्रमा आएका सलोनले अध्ययन रोकेका छैनन् ।
७. सन्दिप क्षेत्री
चर्चित हाँस्य कलाकार हुन् सन्दिप क्षेत्री । तर उनको परिचय यत्तिमा सीमित छैन । उनले ६ एकान ६ मा नायक भएर अभिनय गरेका छन् । यतिवेला उनलाई फिल्मी अफरहरु आइरहेको स्रोतको दावी रहेको छ । यी हाँस्य अभिनेताले कमर्श विषयमा मास्टर्श सम्मको अभिनय गरेका छन् ।
६. दिनेश डिसी
बहुमुखी प्रतिभाका धनी दिनेश डिसी रेडियोकर्मी हुन्, फिल्म निर्देशक हुन् र अभिनेता पनि हुन् । विद्यार्थि राजनीतिवाट सानो पर्दामा आएका डिसीले कुनैवेलाको चर्चित टिभी शो ट्वाक्क टुक्कको निर्देशन गरेर ख्याति कमाएका थिए । उनी फिल्म निर्देशकहरुको संस्था निर्देशक समाजको अध्यक्ष पनि भइसकेका छन् । उनले धेरै फिल्ममा अभिनय गरेका छन् । उनी सोलो हिरो भएको फिल्म किशोर राना निर्देशित घाम छाँया हो । यस फिल्ममा डिसीले नायिका क्षितिजा शाक्यसँग स्क्रिन सेयर गरेका छन् । डिसीले सरस्वती क्याम्पसवाट एमवीए सम्मको अध्ययन गरेका छन् । उनले अस्कल क्याम्पसवाट वीएससी सकेर एमवीए गरेका हुन् ।
५. सुरज सिंह ठकुरी
कान्तिपुर टिभीको कल कान्तिपुरबाट टिभी यात्रा सुरु गरेका सुरज चलचित्र कर्कश बाट सिनेमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् । नाइ नभन्नु ल २ मा अभिनेता भएर देखिएपछि उनले राम्रै चर्चा पनि पाएका थिए । म्यूजिक भिडियोको निर्देशन र मोडलिङका नामी सुरजले इनभयारोेमेन्ट एन्ड साईन्समा मास्टर्श गरेका छन् ।
४. राज बल्लभ कोईराला
कुनै समय अभिनेता राजबल्लभ कोइरलाको नाम निकै ठूलो सुनिन्थ्योे, फिल्मबृत्तमा । हाल अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका उनले २००७ मा चलचित्र पर्खी बसे बाट रजतपटमा इन्ट्री मारेका थिए । दर्जनौं फिल्मका हिरो कोइराला राम्रो अभिनय गर्ने कलाकारमा दरिन्थे । उनले २०११ मा पोलीगन कलेजबाट मासकम्यूनिकेसन एन्ड जर्नालिजममा मास्टर्श गरेका हुन ।
३. खगेन्द्र लामिछाने
चलचित्र बधशालाबाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका अभिनेता हुन् खगेन्द्र लामिछाने । राम्रो, स्तरिय र बौद्धिक फिल्म खेल्छन् भन्ने छवी बनाएका खगेन्द्र प्रसाद लामिछा सन् १९९९ देखि रंगमञ्चमा सक्रिय छन् । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा लेखक, निर्देशक, अभिनेताको रुपमा सहभागिता जनाइसकेका उनी खासमा रंगकर्मी हुन् । तर फिल्म क्षेत्रमा पनि उनको योगदान कम छैन । खासगरी पशुपतिप्रसादमा उनले निर्वाह गरेको भूमीका तारिफ योग्य रह्यो । खगेन्द्रले त्रिभुवन युनिभर्सिटी बाट मास्टर्श गरेका छन् । उनको चलचित्र डमरुको डन्डिबियो र जय भोले प्रर्दशन क्रममा छन् ।
२. प्रदीप खड्का
भर्खरै मात्र प्रदर्शनमा आएको चलचित्र लिलिबिलीबाट हिटको ह्याट्रिक गर्न सफल भएका छन अभिनेता प्रदिप खड्का । स्केपबाट चलचित्र नगरिमा प्रवेश गरेका उनले यसअघि प्रेमगीत र प्रेमगीत २ मा नायक भएर आफ्नो कौशल प्रदर्शन गरिसकेका छन् । उनले सिक्किम मनिपाल युनिभर्सिटीबाट मर्केटीङमा मास्टर्श गरेका छन् ।
युग देखी युगसम्मवाट रजतपटमा पाइला टेकेका अभिनेता राजेश हमाल यस्ता अभिनेता हुन् जो आम नेपाली माझ परिचित छन् । उनी सिंहदरबार देखि जनताको झुप्रोसम्म रुचाइएका सुपरस्टार पनि हुन् । राजेशले यस्तो ख्याती आर्जन गर्नुमा उनको औपचारिक अध्ययन पनि साहायक सिद्ध भएको छ । उनले भारतको चंडिगढ युनिभर्सिटीबाट अंग्रजी साहित्यमा मास्टर्श गरेका छन् ।
राजविराज विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा
‘स्थानीय जनतालाई सिंहदरबारकै सरह सुविधा’ : हरेराम
सप्तरीबाट १० हजार जना जनकपुर जाने
विद्यालय स्वास्थ्य पोषण सम्बन्धि शिक्षक तथा स्वास्थ्य संस्थाका अभिमुखिकरण कार्यक्रम
सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिका फत्तेपुरमा मेयर कप फुटवल प्रतियोगिता शुरु
थारु महिला सभा सप्तरीको दोश्रो अधिवेशन शुरु
परिक्षा दिन गएका १६ बिद्यार्थीलाई खोलाले बगायो, उद्धारकार्य जारी राख्दै प्रहरी
जिल्लामा पहिलो भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण
Categories: सिनेमा, स्थानीय समाचार
सप्तरीको बोदे बर्साइनमा भएको कुसतीको केहि झलकहरु (तस्वीर सहित)
आगलागी हुदा छ लाख भन्दा बढिको क्षति